भित्रियो कि नयाँ भाइरस ! – The Triratna
भित्रियो कि नयाँ भाइरस !
१२ पौष, काठमाण्डौं । बेलायतमा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस फेला परेपछि उक्त मुलुकबाट नेपाल भित्रिएका २ सय ३५ जना नागरिक निगरानीमा परेका छन्। १४ जना क्वारेन्टाइनमा छन्।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी)का कार्यकारी प्रमुख डा. प्रदीप ज्ञवालीले बेलायतबाट आएका व्यक्तिको नमुना लिएर जिन सिक्वेन्सिङको प्रक्रिया सुरु गरिने बताए। ‘स्वाब लिइसकिएको छैन। स्वाब लिएको हप्ता÷दश दिनभित्र नतिजा आइसक्छ’, डा. ज्ञवालीले भने। डा. ज्ञवालीका अनुसार दोस्रो पटक गर्न लागिएको आनुवंशिक अध्ययनमा ४०÷५० वटा स्याम्पल लिएर अध्ययन गरिँदै छ।
परिषद्ले आनुवंशिक संरचना अध्ययन गर्दा नेपालमा भेटिएको भाइरस भारत, बंगलादेश र साउदी अरबको भाइरसको प्रकृतिसँग मिल्दोजुल्दो पाइएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको झन्डै सात महिनापछि पहिलो पटक १५ वटा नमुना संकलन गरेर जिन सिक्वेन्सिङद्वारा आनुवंशिक अध्ययन गरिएको थियो। नयाँ स्वरूपको भाइरस फैलने क्रम तीव्र भएपछि भारत, स्पेन, हङकङसहित ४० भन्दा बढी मुलुकले बेलायतबाट हुने उडान प्रतिबन्ध गरिसकेका छन्।
प्रकाशित मितिः आइतवार, पुस १२, २०७७ 8:18:23 AM